Misoro yeNhau, 04 Nyamavhuvhu 2019
Svondo 4 Nyamavhuvhu 2019
Misoro yeNhau dzaNhasi, Chishanu, Nyamavhuvhu 02, 2019
Vanhu vakawanda munyika vanorangarira kuurayiwa nekukuvadzwa kwakaitwa vanhu gore rapera mumhirizhonga yakaitika musi waNyamavhuvhu 01, 2018
Misoro yeNhau dzaNhasi, Chitatu, Chikunguru 31, 2019
Mumwe mukuru mukuru muhofisi yemutungamiri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, Va Douglas Tapfuma, vanomiswa pamberi pematare edzimhosva vachipomerwa neZimbabwe Anti Corruption Commission, ZACC, mhosva yekuita zvehuori.
Misoro yeNhau dzaNhasi, Chipiri, Chikunguru 30, 2019
Mutengo wepeturu nedhiziri unokwira zvakare panguva iyo mari dzekupaka motokari muHarare dzichikwidza nezvikamu mazana mana kubva muzana.
Misoro yeNhau dzaNhasi, Muvhuro, Chikunguru 29, 2019
Gurukota rezvevashandi Amai Sekai Nzenza vanovimbisa kuti magwaro anoratidza kusafambiswa zvakanaka kwemari kuNSSA achaburitswa munguva pfupi inotevera.
Misoro yeNhau dzaNhasi, Chishanu, Chikunguru 26, 2019
Gurukota rezvekushanyirwa kwenyika, Amai Prisca Mupfumira, votarisirwa kumiswa pamberi pematare vachipomerwa mhosva dzine chekuita nehuoro hunonzi hwakaitwa kuNational Social Security Authority apo vaive gurukota rezvevashandi nemabasa.
Misoro yeNhau dzaNhasi, China, Chikunguru 25, 2019
Gurukota rezvekushanyirwa kwenyika, Amai Prisca Mupfumira, vanosungwa neboka reZimbabwe Anti Corruption Commission vachipomerwa mhosva yekuita huori panyaya dzine chekuita nekufambiswa kwemari musangano reNational Social Security Authority.
Misoro yeNhau dzaNhasi, Chitatu, Chikunguru 24, 2019
Hurumende yoedza kukwezva vari kunze kwenyika ichiti vane basa guru rekubatsira mukusimudzirwa kwehupfumi hwenyika.
Misoro yeNhau dzaNhasi, Chipiri, Chikunguru 23, 2019
Rimwe remasangano anomirira vadzidzisi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, kana kuti PTUZ, rinoti nhasi riri kuita musangano nemutungamiri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, vachizeya matambudziko evarairidzi vakaremara pamwe nezvimwe zvichemo zvevarairidzi.
Misoro yenhau, Muvhuro, Chikunguru 22, 2019
Hurumende yowedzera mari yemafuta ekufambisa kusvika pamadhora manomwe nemasendi makumi mana nemashanu papeturu, ukuwo dhiziri ichiwedzerwa kusvika pamadhora manomwe nemasendi gumi nemanomwe.
Misoro yeNhau dzaNhasi, China, Chikunguru 19, 2019
Masangano evanhukadzi ari pasi peWomen’s Coalition of Zimbabwe, anoti ari kushushikana zvikuru nenyaya dzevanhukadzi vari kubuda vachitaura kuti vakabatwa chibharo, kana kuitwa zvepabonde navo nemukuru wechechi ane mukurumbira munyika, Prophet Walter Magaya.
Chikunguru 18, 2019
Misoro yeNhau dzaNhasi, China, Chikunguru 18, 2019
Rimwe remasangano anomirira vadzidzisi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, kana kuti PTUZ, rinoti nhengo dzaro dzichatanga kuramwa mabasa mangwana richiti mari iri kutambiriswa vadzidzisi ishoma zvikuru.
Chitungwiza Yoberekera Ingwe kuVatsigiri veMDC?
Hurongwa hwaVaMthuli Ncube neIMF Hwokonzera Gakava Munyika
Mapurisa Anorambidza MDC Kuratidzira muGweru neMasvingo
Zimbabwe Yoshoropodzwa Zvikuru neKutyora Kodzero dzeVanhu